Ny mailaka "IATA Fraud Alert" dia hanimba ny solo-sainanao
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny mailaka "IATA Fraud Alert" dia hanimba ny solo-sainanao
Airlines • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao • Safety • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
IATA dia namoaka singa famolavolana lehibe an'ny IATA Travel Pass
IATO.org dia tsy IATA.org, fa adiresy mailaka voafitaka manandrana mangalatra ny mombamomba anao na hanaiky lembenana ary hanimba ny solosainao.
ny mailaka avy amin'ity adiresy ity dia mivezivezy any amin'ireo orinasam-pizaharana ekena na IATA.
Orinasa manana mailaka miverina [email voaaro] dia mandefa mailaka virus miaraka amin'ny tanjona hanapotehana ny rafitry ny solosaina.
Ny mailaka dia natao hamitahana ireo mpandray mba hanokafana miraikitra maloto arovana kaody antsoina hoe pass-code.
Tsy namaly i IATA.
Nisy mailaka phishing iray nalefan'ny orinasa mpanao heloka bevava ho an'ireo masoivohon'ny Etazonia mpiaraka amin'i IATA,
Toa avy amin'i IATA ity mailaka ity, ny Fikambanana iraisam-pirenena fitaterana rivotra.
Ny mailaka dia mangataka amin'ireo mpandray hanokatra famandrihana maloto ary hampiasa tenimiafina omena hanaovana izany. Raha vantany vao ampidirin'ny mpandray ity tenimiafinao ity dia handoto ny solosaina miaraka amina script maloto ity firaketana ity.
Ny mailaka mampidi-doza avy amin'ny iato.org (tsy iata.org) dia mivaky toy izao:
Ry Agent malala,
Tonga saina ny IATA fa misy ny fisolokiana tsy tapaka ataon'ireo mpijirika amin'ny fidirana amin'ny rafitra famandrihana Agents sy famoahana tapakila an'habakabaka. Ny fanafihana dia be pitsiny, mitarika tsy ny fatiantoka ara-bola goavambe ho an'ny Agents fa koa ny fanitsakitsahana ny rafitry ny Agent.
Mba hiarovan-tena amin'ireo fanafihana marobe dia manoro hevitra mafy izahay ny fepetra fiarovana mifatotra.
Noho ny antony fiarovana dia ampiasao ity kaody ity hanokafana ny miraikitra: 123
Serivisy ho an'ny mpanjifa IATA
Izay mahazo mailaka toy izany dia tokony hamafa izany ary hanadio ny fako.